Yakanakisa emahara emavhidhiyo mitambo yeGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine iyo Steam mutengi yakaiswa pane yako GNU / Linux distro, unogona kuenda kuchitoro uye kubva ipapo shandisa mafirita ekutsvaga chete maFree mazita aripo. Uchaona kuti muchitoro hamuna kungobhadharwa mitambo yemavhidhiyo, kune mamwe asingadhure mari uye kuti haasi ese marara, mamwe anonakidza uye akanaka mitambo yemavhidhiyo. Uye kune ese marudzi ese uye ezvese zvido, kubva pakuita, simulation, zano, shooter, nezvimwe.
Kunyangwe kana iwe usina iyo Steam mutengi yakaiswa, iwe unogona zvakare kuyedza kurodha pasi nekumisikidza ivo kubva kuzororo kana kubva kunowanikwa kubva kwaunogona kurodha pasi nekumisikidza yega yega yemazita. Zvisinei nemabatiro aunoiisa iwe, ndinofanira kukuratidza runyorwa urwu nemamwe mazita ekuti zvimwe iwe wanga usingazive uye izvo vakasununguka kutamba uye edza kuti yako distro iri mukutamba ...
Izvi zvimwe zve iyo yakakurudzirwa mitambo yemavhidhiyo izvo zvisingabhadhari chinhu kune yako distro:
Codename Mushonga: Iye munhu wekutanga kupfura nemamwe mamishini ekutamba mune imwechete mutambi modhi, asi zvakare neakawanda multiplayer modhi. Basa rako richava rekurarama uye kubvisa maZombi.
Super Tux Kart: Ndiyo vhezheni yeSuper MarioKart, asi ma protagonists ayo ari mascot epurojekiti yakavhurika sosi, seBeastie, Tux, nezvimwe. Iwe unogona kukwikwidza uchitenderedza maseketi akasiyana siyana, tsvaga mazai, kurwa, nezvimwewo, pamwe nekushandisa nhevedzano yemidziyo iwe yaunogona kutora paunenge uchifambira mberi ku "kumutsa vamwe."
Zviuru gumi BC: Kana iwe uchida zano uye waifarira Zera reMambo, iwe urikudawo kuitiswa uku nemifananidzo yakanaka nezvose zvaunoda kuti upedze maawa uchitamba nenzira dzakasiyana, mataundi, uye mepu.
AssaultCube: ipfuti haina mifananidzo inoshamisa, zvakapesana. Asi zvinonakidza kushandisa imwe nguva uchitamba uchipesana nemuchina (bots) kana muvazhinji mode uye nemapoka evashandisi vanobva kune dzimwe nzvimbo.
Alien Arena: Varwi veMars:
dota 2: Mamirioni evatambi kutenderera pasirese vakasungirirwa pane ino Valve zano mutambo, uye nechikonzero ichave iri ... Chokwadi ndechekuti mutambo wakanaka uye ndewemahara.
War Thunder- Kana iwe uchida kurwa pasi, gungwa nemhepo, ichi chiito chikuru chekurwira nezvikepe, ndege uye nemotokari dzenyika.
Kubata Planet: imwe yemifananidzo inoshamisa kwazvo iwe yaunowana, iine nharaunda dzakanaka mune zvakasikwa uye kudzidzira chiitiko chakazorodza sekuredza, digitally, asi hove ...
Star Conflict: Kana iwe uri StarTrek kana Star Wars fan, uye iwe uchida zvemahiphip hondo, iyi yemahara zita iri kuzokufadza.
Hapasisina Kamuri Mugehena: ndeumwe wevaya vekutanga kupfura munhu nenyaya inotyisa kuseri kwayo. Saka kana iwe uchida kupfura uye kunakidzwa, iwe uchazvifarira.
Tangi simba: Handizive kana iwe uchayeuka zita rekare rinonzi Power Tank, zvakanaka, kana iwe uchida kutyaira tangi yehondo uye kurwisa vavengi, uyu ndiwo mutambo wako wevhidhiyo.
Cayne tsime rezita rokutanga: inonakidza nyaya ine chakavanzika. Iwe unozopinda mune shangu dze protagonist yaro uyo ari mune isingazivikanwe kamuri maanomukira, ane nhumbu uye ivo vanoda mwana wavo ... iwe unoda kutsvaga zvimwe?
Kufambisa: Element 120: ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo yakashandisa hwaro hweValve Hafu Hupenyu kugadzira imwe nyaya padivi. Wekutanga-munhu shooter inoenderera yakakosha yeHalf Hupenyu nemamwe matsva ma skrini uye nyaya dzekukunda.
Hondo yechokwadi- Mumwe mutambo wehondo, FPS yekumbotandara nayo kwe € 0.
VDrift- Yekutyaira simulator maunotyaira mota dzakasiyana pamaseketi akasiyana.
Speed ​​kurota: imwe nzira kune yapfuura kutyaira anomhanya mota munzira dzakasiyana.
Trigger Rally: pamwe izvo zvaunofarira mota dzerally kuendesa kure-munzira, zvakanaka, kana zvirizvo, uyu mutambo wako wepachena.
FlightGear- Kubhururuka ndege mune ino simulator yekubhururuka, kwaunogona kutora kuenda kumatenga ane yakadzikama mifananidzo uye yakavimbiswa mafaro.
pingus: Kunyangwe iri chirongwa chakasiiwa, iyi inonakidza yemahara uye yakavhurwa sosi yemavhidhiyo mutambo haubude muchitaera maunotungamira maTux penguin kune chinangwa chavo, muchimiro chechokwadi cheLemmings
freecraft: Iyo yakasununguka uye yemahara imwe nzira kune Minecraft, saka unogona kutamba mimwe mitambo uchiparadza nekuvaka zvinhu ...
Uye kupfuura zvese, kana iwe ukabhowekana navo vese, kune zvakawanda zvakawanda zvakakumirira iwe muzororo kana muchitoro cheStam. Rangarira, shandisa iyo tag Huru Kutamba zvekuti zvinongoratidza mazita akasvinwa asingadhuri chinhu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakanakisa emahara emavhidhiyo mitambo yeGNU / Linux
Minetest ine «mineclone», kutya kwemaguta uye nhare yeTimu yanga ichishaikwa. :)
Pindura kune zvese
Fernando Cortes akadaro
Nezve Warthunder, uyu mutambo mukuru une yakajeka graphic kuratidza. Inogona kurwiwa nematangi, ndege, ngarava uye maherikoputa ayo anotangira kubva pakutanga kweChipiri Hondo Yenyika kusvika kuKorea Hondo. Iyo ine arcade, chaiyo uye simulator modes. Kune ekupedzisira, zvinokurudzirwa kushandisa joystick.
Pindura kuna Fernando Cortés
Kune hupenyu hunopfuura hwemvura, muchokwadi kune zviuru zvemitambo yakanaka yemahara, yemahara uye yakawanda.